KDEApps4: Ngwa obodo KDE maka njikwa ịntanetị | Site na Linux
Taa, anyị na -aga n'ihu na nke anọ «((KDEApps4) » site n'usoro isiokwu dị na "Ngwa KDE Community". Iji mee nke ahụ, gaa n'ihu na -enyocha katalọgụ sara mbara ma na -eto eto free na-emeghe ngwa nke ha mepụtara.
N'ụzọ dị otu a, ịga n'ihu na -agbasawanye ihe ọmụma gbasara ha nye ndị ọrụ niile n'ozuzu ha GNU / Linux, ọkachasị ndị nwere ike ha anaghị eji «KDE Plasma » dị ka «Desktọpụ Environment» isi ma ọ bụ naanị.
Maka ndị nwere mmasị inyocha 3 anyị gara aga mbipụta ndị metụtara isiokwu ahụ, ị nwere ike pịa njikọ na-esonụ, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a:
1 KDEApps4: Ngwa maka njikwa ịntanetị
1.1 Ịntanetị - Ngwa KDE (KDEApps4)
KDEApps4: Ngwa maka njikwa ịntanetị
Ịntanetị - Ngwa KDE (KDEApps4)
Na mpaghara njikọta a Internet, na "Obodo KDE" amalitela n'ihu ọha Ngwa 22 nke anyị ga -ekwu maka ya na ịza ajụjụ ya, n'ụzọ ederede na nkenke, 10 mbụ, mgbe ahụ anyị ga -ekwupụta 12 ndị fọdụrụ:
Akregator: Ọ bụ onye na -agụ isi mmalite akụkọ, nke na -enye ohere ịgbaso saịtị akụkọ, blọọgụ na webụsaịtị ndị ọzọ nwere RSS / Atom na -arụ ọrụ, na -enweghị mkpa iji aka gị jiri ihe nchọgharị weebụ chọpụta mmelite.
agu iyi: Ọ bụ onye na -agụgharị mgbasa ozi weebụ.
Banji: Ọ bụ onye ahịa eserese maka ikpo okwu nkwukọrịta mgbanaka (www.jami.net). Enwere ike iji ya dị ka ngwa izugbe maka nkwukọrịta n'etiti ndị ọrụ mgbanaka ndị ọzọ ma ọ bụ dị ka ekwentị sọftụwia VoIP dakọtara na ọkọlọtọ ụlọ ọrụ SIP nke ọtụtụ ekwentị ụlọ ọrụ na -eji.
Choqok: Ọ bụ onye ahịa microblogging na -akwado ọrụ Twitter.com, GNU Social, Pump.io na Friendica.
Onye na -ebupụ data PIM: Ọ bụ ngwa na -enye gị ohere mbupụ na mbubata mmasị PIM (Njikwa Ozi Nkeonwe).
Falkon: Ọ bụ ihe nchọgharị weebụ ọhụrụ na ngwa ngwa. Ọ na -achọ ịbụ ihe nchọgharị weebụ dị fechaa dị maka nyiwe niile ama ama. Amalitere oru a na mbụ maka ebumnuche mmụta. Agbanyeghị, site na mbido, Falkon aghọọla ihe nchọgharị bara ọgaranya.
Kaidan: Ọ bụ onye ahịa Jabber / XMPP dị mfe na enyi nke na -enye ihe ọhụụ nke na -eji Kirigami na QtQuick. Edere injin Kaidan kpamkpam na C ++ ma jiri ọbá akwụkwọ ndị ahịa XMPP "qxmpp" na Qt 5.
Kasts: Ọ bụ ngwa pọdkastị maka mobiles, nke na -arụkwa ọrụ na GNU / Linux, n'ihi na emepụtara ya dịka onye ọkpụkpọ pọdkastị na -agbanwe agbanwe dabere na Kirigami.
KDE Jikọọ: Ọ bụ ngwa ngwanrọ nke na -enye ọtụtụ ọrụ iji jikọta ekwentị na kọmputa. Na mgbakwunye, ọ na -enye gị ohere izipu faịlụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, jikwaa ọkpụkpọ mgbasa ozi, zipu ntinye dịpụrụ adịpụ, lelee ọkwa gị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nweta: Ọ bụ onye njikwa nbudata dịgasị iche na enyi.
Ngwa ndị ọzọ mepụtara na mpaghara njikọ a Internet site na "Obodo KDE" bụ:
Kirogi: Njikwa ala Drone.
Onye meriri: Ihe nchọgharị weebụ, onye njikwa faili na onye na -ekiri ya.
Mkparịta ụka: Onye ahịa IRC.
Kopete: Ozi ngwa ngwa.
KRDC: Onye ahịa desktọọpụ dịpụrụ adịpụ.
Krfb: Desktọpụ Ekekọrịtara (VNC).
KTorrent: Onye ahịa BitTorrent.
Ihe nchọgharị weebụ Angelfish: Onye na -agagharị na weebụ.
NeoChat: Onye ahịa maka Matrix.
Ruqola: Onye ahịa maka Rocket.Chat.
Oghere: Ngwa SMS.
ekwentị: Ziga ma nata oku ekwentị.
Na nkenke, nke a bụ sample ndezigharị nke anọ "(KDEApps4)" nke ngwa ukara dị adị nke "Obodo KDE", nke na -agwa ndị nọ na ngalaba njikọta aka Internet. Yabụ, anyị nwere olile anya na ọ ga -enye aka n'ịkpọsa na itinye ụfọdụ n'ime ndị a n'ọrụ ngwa ọdịnala banyere dị iche iche GNU / Linux nkesa. Nke a, n'aka nke ya, na -atụnye ụtụ n'iji oke na ike dị egwu ngwanrọ software lee ka o si maa mma ma na -arụsi ọrụ ike Obodo Linuxera na -enye anyị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » KDEApps4: Ngwa obodo KDE maka njikwa ịntanetị
InviZible Pro: Ngwa Android maka nzuzo na nchekwa dị n'ịntanetị